I-Musaka yinto ecocekileyo yemifuno, eyinto yokutya yesizwe yeMoldova, isiBulgaria, isiGrike kunye neMpuma. Njengawuphi na isidlo, i-moussaka inebali. Ukulungiswa kwesi sidlo kulula, kodwa i-flagrance iya kuba ingayibaleki. Kwaye oku kufezekiswa ngokudibanisa izithako ezinjenge-eggplant ezivuthiweyo, iwundlu elincinci kunye netamatato. Ngako oko, umxholo wenkcazelo yanamhlanje yi "Cuisine yezizwe ze-recipes moussaka".
Umgcini we-mousaka yanamhlanje isidlo esibizwa ngokuthi iMagum, iresiphi yayo eyayigcinwe kwi-cookbook ye-Arabhu yekhulu le-13. Esi sidlo sasendulo sifana nesitshalo seqanda saseGreek. Le ncwadi iqulethe iresiphi ye "musakhan" - isidlo esiseJebhanese cuisine kwaye iyalungiselelwa kwiintsuku zethu eMiddle East. Nangona kunjalo, akukho nto enokuyenza ngayo iresiphi yesigaba.
Akunakwenzeka ukuseta umhla ochanekileyo wokubonakala kwe-moussaka. Kukholelwa ukuba inokuvela ekuqaleni kokupheka kwamaGrike. Ngaloo ndlela, imbali yesi sidlo sineminyaka engamawaka amathathu. Kwiminyaka emininzi indawo yesiGrike yayingaphantsi kwedyokhwe yeTurks, engenakho ukuvelisa inkcubeko yabo kuphela, kodwa nezobugcisa belizwe. Ukutya kwaseMpuma kufanelwe kumathuba omdaniso waseMedithera, okhokelela ekuveleni kwe-moussaka.
Ngokwezinye iinguqulelo, igama elithi "moussaka" livela kwi-Arabhu "musaqqa", oku kuthetha "ukutshatyalaliswa" (isenzi "saqqa" - ukupholisa). Emazweni aseArabhu, esi sidlo sibizwa ngokuthi isaladi ebandayo yeatamatisi kunye nama-arubergines, afana ne-Italian caponate. Kukho umyalezo othi "moussaka" uthetha "i-juicy", ebonisa ngokuchanekileyo ukuchaneka kwesitya.
Iimpawu zokupheka moussaki kwiindawo zokutya ezahlukeneyo zabantu behlabathi
Iimpawu ezintle zeTurkey ne-Greek moussaki zihluke kakhulu. AmaTurks endaweni ye-eggplants zisebenzisa i-zucchini okanye i-peas, kwaye iimveliso zithinjwa zonke kunye, kwaye zingabonakalwanga. EMoldova, isidlo esifanayo sipheka isiqingatha kunye nomzimba wesiqingatha nemifuno, nangona kukho imifaka yonke yemifuno. Kodwa inguqulelo yesiBulgaria yesitya yizo zonke iintlobo ze-casserole inyama enqunyiwe kunye namazambane. I-moussaka yesiGrike ifana ne-Bulgarian "gyuvech", oku kuthetha "freebie".
EGrisi, i-moussaka yindawo ekhukhumekileyo eyenziwa yimvana, utamatisi kunye ne-eggplants egcwele i-sauce emhlophe. Inguqu yeBalkan yesitya (eRomania, eSerbia naseBosnia) ayifaki ukusetyenziswa kweeubergines - endaweni yazo yongeza utamatisi ovuthiweyo. Akunakwenzeka ukuba ezinye iifuno zongezwa kwi-fox - anyanisi, iklabishi, i-zucchini, iifatata. KwiCroatia, i-noodle kunye nama-mushroom aninzi.
I-Recipe ye-classic yeMoldovan moussaka
Ukuze uzilungiselele esi sidlo uya kufuna ama-eggplants, anyanisi kunye neetatayi, ezihlambulukileyo kwaye zihlanjwe. IMvana iyona isithako esiqhelekileyo kule nguqulelo ye-moussaka, ngaphantsi kwexesha elidlulileyo, kwaye kaninzi kangako - ingulube. Umlinganiselo wenyama kunye nemifuno kufuneka ibe ngu-1: 1. Inyama ehlanjwe iyanqunyulwa zibe ziincinci ezincinci, njenge-goulash, kunye nemifuno - kwimijikelezo. Ngamanye amaxesha ku-moussaka wongezelela okanye ukongeza iklabishi, okanye izitata, okanye i-zucchini.
Emva koko, kwifom egcotyiweyo, kuqala ubeke ii-eggplants, ngoko utamatisi, anyanisi, ezinye iimifuno kunye nendawo yokugqibela yenyama, ubuye uphinde uphinde uphinde ubeke kwakhona. Emva kwimizuzu emibini okanye emithathu isitya sisetyenzisiwe kwaye sichithe ngeengqumbo (igalikhi, iqabunga le-bay, i-parsley, i-dill, ipowusi). Amanqwanqwa enyama ayetyuwa kwaye athathwe ngokwahlukileyo. Umgca wokugqibela wesitya kufuneka ube yimifuno. Yonke le ifakwe ioli, i-ukhilimu omuncu kwaye ithunyelwe kwi-oven ngeyure.
Isitya sixoxwe njengekhekhe kwikhekhe ukwenzela ukuba izitya azidibanisi. Ngaphezulu, i-moussaka ithululelwa ngejusi ukusuka kwifom apho ibhaka, ifafazwe ngamacube. Yidla esi sidlo esitshisayo ngesonka esitsha kunye nesaladi eluhlaza.
Ubungqina bokupheka i-moussaki eGrisi naseKyprus kukuba esi sidlo siyabhakwa kwaye sikhonze kwizimbiza zobumba. I-Cypriot version ye-moussaka ibhekwa njengenye yezona zizonwabe kakhulu. Zonke izithako zesitya zi-othoyiweyo kwioli yeoli, kwaye zijongwa ngezimbiza zobumba kwaye zizaliswe nge-béchamel sauce. Inyama isetyenziselwa inyama yegusha.
EGrisi, i-moussaka ivame ukupheka kwiphepha elibhaka kunye namacandelo aphezulu, apho iindawo ezibekwe khona kunye nemifuno (umgca kufuneka ube mkhulu) kunye nenyama, ukutshintshana kwezi zigaba. Emva koko isitya sigcwele ubisi omhlophe okanye i-sauce enomuncu kwaye ithunyelwe kwi-ovini ngeyure enye. Esikhundleni se-sauce, ngamanye amaxesha basebenzisa umxube weeshizi ezigayiweyo kunye namaqanda atshaywayo. Oku kwenza isidlo siqhenqa esinqabileyo.
Kuzo zonke iivenkile zokutya zala mazwe ukutyalela i-moussaka ziya kuba zihluke kakhulu. Kuxhomekeke kwiizithako ezisetyenzisiweyo, ezihluke kumandla kunye nomnqweno, kunye neqoqo lezonongo, i-seasonings kunye neziqholo ezongeziweyo kule ndawo.
Izidlo ezinomsoco: zokupheka ezilula
I-recipe ye-cheeseecake esiphunga isonka esiphunga ngaphandle kokubhaka
Indlela yokwenza isandwich
Izitya ezidliwayo zeetafile
Pilaf kunye nenkukhu
Indlela yokufundisa umntwana ukuba ahlale?
Indlela yokufumana iingubo kwimpahla
ICHIKAMI - ubuhle kwimvelo
Ukuqhaqhaqha okanye ukuvota kwesikhopho kubantwana
Ubuso: ukuhlengahlengiswa kwesikhumba esingabonakaliyo
Ioli ye-almond yamanqaku athatywayo
Kuthekani ukuba ulwalamano lwam nomntu othandekayo luphukile?
Yintoni eyisiko ukunika umntwana osana?
I-pizza ye-Okonomiyaki yaseJapan (i-Okonomiyaki)
I-Feng Shui igumbi elinye kwigumbi